Golaha wasiirrada oo ka digay duufaan la sheegay in ay ku soo wajahantahay xeebaha Soomaaliya. – Radio Daljir
Diseembar 24, 2012 6:11 b 0
Muqdisho, Dec, 24- Shir maanta golaha wasiirada Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay kaga hadleen arimo ay ka mid yihiin Duufaan la sheegay inay ku soo maqan tahay xeebaha dalka, taasoo ay kaga digeen dadka kulaala deegaanada xeebaha.
Kulanka waxaa shir gudoominayay R/wasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), kulanka ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday ammaanka dalka gaar ahaan sidii loo sugi lahaa xasiloonida jidka xiriiriya Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed oo dhamaadkii shirka ka hadlay ayaa saxaafadda u sheegay in dawladdu ay si dhakhsaa ugu hawl gali doonto xasilinta wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
(Dhagayso) Wasaaradda maaliyada Puntland oo baarlamaanka Punltnad maantay horgaysay miisaaniyada 2013-ka.